South African President Ramaphosa slammed and told to 'keep quiet' after he 'insulted' Zimbabweans : South Africa News
South African President Ramaphosa slammed and told to ‘keep quiet’ after he ‘insulted’ Zimbabweans
diveinsouthafrica January 25, 2019 January 25, 2019 2 Comments on South African President Ramaphosa slammed and told to ‘keep quiet’ after he ‘insulted’ Zimbabweans
Zimbabweans have expressed anger at South African president Cyril Ramaphosa’s claims that the country was on the path to democracy, at a time when at least 12 people were shot dead for exercising their constitutional right to demonstrate.
“It is no longer necessary to have sanctions against Zimbabwe right now, because they have embarked on democracy and a path of real recovery and we will help them best by lifting those sanctions,” Ramaphosa said.
However, Zimbabweans and analysts have expressed anger at Ramaphosa’s claims, following protests sparked by the government’s 150 percent fuel price increase.
“… Ramaphosa says Zimbabwe has emerged from a difficult situation when the reality is that the country is actually in a deep political crisis,” UK-based Kent University law lecturer Alex Magaisa wrote on Twitter.
Politician and Harare lawyer Fadzayi Mahere said Ramaphosa was supposed to keep quiet instead of “insulting” the people of Zimbabwe.
“It is insulting to the Zimbabwean people for African presidents to claim Zimbabwe is on the path to democracy, this within days of army killings of unarmed civilians.
Pakistan Vs South Africa Live 3rd Match 2019 Watch Live Cricket Streaming Today Match
Pakistan Vs South Africa 3rd Odi Match Live
2 comments on “South African President Ramaphosa slammed and told to ‘keep quiet’ after he ‘insulted’ Zimbabweans”
apenbranog1987 January 25, 2019 at 11:44 am
bercohighles1988 January 25, 2019 at 2:06 pm